Lanzarote: waxa la arko | Wararka Safarka
Mariela Carril | 30/12/2021 17:00 | Lanzarote, Maxaa la arkaa
Lanzarote waa jasiiradda Jasiiradaha Canary, iyo tan iyo 1993 oo dhan iyada Kaydinta Biyo-Nololeedka. Bal qiyaas markaa quruxdeeda! Waa jasiiradda afaraad ee ugu weyn kooxda waxaana loo yaqaanaa magaca "Jasiiradda Volcanoes".
Maanta waxaan ogaan doonaa waxa aadan joojin karin eeg Lanzarote.
2 Waxa lagu arko Lanzarote
Jasiiraddu waxay qiyaastii 140 kiiloomitir u jirtaa xeebaha Afrika, qiyaastii 1000 waxay u jirtaa qaaradda Yurub. Ku raaxayso a cimilada kulaylka ahRoobab aad u yar ayaa da'aya halka ugu sarreysana waa Las Peñas del Chache oo leh 671 mitir oo joog ah.
Sida aan sheegnay bilowgii 1993 UNESCO ayaa ku dhawaaqday Kaydinta Biyo-Nololeedka iyo in kastoo dhaqan ahaan ay u heellan tahay beeraha iyo kalluumeysiga in muddo ah qaybtan dhaqaalaheeda asal ahaan ka shaqeeya agagaarka dalxiiska.
Waxa lagu arko Lanzarote
In loogu yeero "jasiiradda volcanoes" waxa ugu horreeya ee la arko waa volcanoes. In kasta oo ayan qarxin tan iyo 1824-kii, haddana wali waa firfircoon yihiin, waxqabadkii dhacay bartamihii qarnigii XNUMX-aad waxa ay u habeeyeen gargaarka muuqaal cajiib ah oo ka buuxa basalt taas oo daboolaysa jasiiradda qiyaastii rubuc. Maanta waa ku dhawaad ​​​​dhammaan seeraha qaranka, sidaas darteed waxaan leenahay Beerta Qaranka ee Timanfaya.
Runta ayaa ah tan muuqaalka dayaxa Waa wax cajiib ah in kastoo ay khatar tahay in lagu sahamiyo lug, waxaad kiraysan kartaa a safarka baska Taasi waxay ku qaadanaysaa inaad aragto webiga lafaha iyo ilaa 25 jeexjeexyada. Montañas de fuego waxaad ku arki doontaa hagayaal geesiyaal ah oo soo galaya godka qariibka ah iyo makhaayadda El Diablo suxuunta si toos ah ayaa loo kariyaa iyadoo la isticmaalayo kulaylka geotermal. Yaab. Haddii aad rabto wax ka sii casrisan markaa waxaad xor u tahay inaad sahamiso a Baabuur koronto oo qallafsan.
Beertan ayaa ku taal degmooyinka Tinajo iyo Yaiza iyo Waa beerta labaad ee qaranka ee tirada booqashooyinka. Waxay ahayd beerta qaranka tan iyo 1974 waxayna qabsatay dhul dhan 52 kiiloomitir laba jibaaran, dhanka koonfur-galbeed ee jasiiradda.
Soo jiidashada kale ee dabiiciga ah waa godadka Jameos del Agua. Waa nidaam ka mid ah godadka dhulka hoostiisa mara ee mararka qaarkood cirka u furma iyo in maanta ay ku jiraan barkad dabaasha, hoolka shirarka iyo makhaayad. Dhammaan waxaa laga dhisay dhagaxyada dhexdooda iyo biyaha derbiyada hoos u socda.
Waxay ku dhowdahay muuqaal khayaali ah oo waxay ahayd waxaa sameeyay farshaxaniste César Manrique. Marka qorraxdu dhacdo muusiggu waa daaran yahay waxaana jira dhacdooyin gastronomic ah markaa xoogaa xaflad ah samee. Qaabka James Bond? Noqon kara. Habka godka waxaa lagu sahamin karaa iyadoo la kaashanayo hagaha.
Meel kale oo loo socdo waa Tuulada Haría, buur dusheeda, oo u dhaxaysa dhirta kulaylaha, guryaha cad iyo geedaha timirta. Tani waa meesha waxaa jira guriga fanaankii aan horay ugu magacownay César ManriqueSidoo kale, meel gaar ah oo aad ku arki karto istuudiyihiisii ​​hore, dhammaan waxa ay ahaan jireen beero leh naqshad dhaqameedyo jasiiradeed. Matxafku wuxuu furan yahay maalin kasta laga bilaabo 10:30 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, gelitaankuna waa 10 euro.
Degitaanka ugu da'da weyn jasiiradaha Canary waa Teguise, oo ah magaalo la aasaasay 1402. Waxay ahayd caasimadda jasiiradda muddo 450 sano ah iyo waa joog sare. Waxay ilaalisaa dhismayaal badan oo qiimo leh, geedo timireed iyo fagaarayaal, Axadahana waxaa la sameeyay suuq aad u wanaagsan oo aad ka iibsan karto wax kasta laga bilaabo farmaajo ilaa shandad-gacmeedyo harag ah. Haddii aad jeclaatay Manqrique iyo hal-abuurkiisa, waxaad booqan kartaa guri kale oo laga dhisay godad iyo godad Nazaret oo deriska la ah.
Tuulo kale oo xiiso leh oo qurux badan, laakiin waqooyi-bari ee jasiiradda, waa Arieta. Leeyahay qurux badan xeebta ciidda cad, Playa de La Garita, iyo doomo ay ku jiraan doomo kalluumaysi. Waa meel fudud oo wanaagsan in la cuno sababtoo ah halkan Marriqueria el Charcon, halkaas oo daloosha iyo la qabsiga maalinta. Qabooji wax aan macquul aheyn
Haddii aad jeceshahay cacti markaa waxaa habboon in aad dalxiis ku tagto Beerta CactusWaxaa jira noocyo kala duwan oo kala duwan ah, oo loo qaybiyay sidii amphitheater oo ku taal meel dhagax duug ah. Haa waxaas oo dhan mar labaad Waa shaqadii César Manqrique. Waxaa jira 4500 nooc oo 450 nooc ah iyo dabcan waxaa jira baar / kafateeriyada lagu iibiyo burgerrada qaabka cactus iyo casiirka cusub.
Matxafyada waxaa u yaal Museo Atlántico, madxafka ugu horreeya ee biyaha hoostiisa ee Yurub, u dhow Marina Rubicon. Tani waa marin si cadaalad ah u firfircoon oo leh kafateeriyo ku taal badda waxayna ku taal dhamaadka koonfureed ee magaalada Puerto del Carmen, dalxiis aad u badan iyo lacag la'aan ah. Badda hoosteeda waxaa yaal sawirro la taaban karo iyo farshaxanno uu sameeyay farshaxanka Jason deCaires Taylor.
Waqtigu waxa uu sababay in dhamaantood ay gumaystaan ​​makhluuqa baddu sidaa awgeed waa muuqaal dhab ah. Iyo haa, meel aad u fiican oo lagu quusto oo qoto dheer 12 mitir ah.
Sidoo kale waxaa jira barkado dabiici ah oo aad ku dabaalan karto. Waxay ku saabsan tahay barkadaha badda in ay yihiin xeebaha bari iyo koonfur iyo in aysan ahayn wax kale marka laga reebo qaababka dabiiciga ah ee dhagaxyada kuwaas oo kaliya dhowr tillaabo lagu daray si ay u noqdaan kuwo la heli karo oo raaxo leh. Waxay eegaan badda laakiin waa biyo deggan oo ku habboon dabaasha. Tusaale ahaan, Tilmaan Haweenka waqooyi iyo The Charcones meel u dhow Playa Blanca.
Gacanka waa qayb ka mid ah xeebta galbeed ee jasiiradda, a Xeebta foolkaanaha ee rafaadka ah in dadka degani ay heli jireen kafateeriyada iyo maqaayadaha. Mowjadda marmarka qaarkood waxay soo saartaa sayaxa oo qoyan, laakiin aragtidu waa u qalantaa. Guud ahaan, kuwa booqda El Golfo waxay booqasho ku tagaan Ka soo baxa, mid kale oo ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu arko xoogga badda oo dhowo.
Dhinaca kale, haddii aad jeceshahay in aad dabaasho waxaa jira Farmaajo. Duurjoogta adduunka oo dhan ayaa halkan yimaada, ilaa shanta mitir ee ciiddan ah, oo ay magaalada yar ku dhowdahay, baararka iyo kafateeriyada iyo hoteellada. The Xeebta Papagao Aad bay u qurux badan tahay laakiin dhab ahaantii maaha hal xeeb ee waa todoba, ama halkii, xeebo jaale ah oo isdaba-joog ah oo koonfurta ah, oo ay kala soocaan dhagaxyada lafaha.
Waa la hoyday si aanay biyuhu u jirin, biyuhuna waa ammaan. Dabcan maahan xeebaha kaliya ee jasiiradaha, dhab ahaantii waxaa jira xeebta ciidda madow ee Playa del Charco de los Clicos oo leh dhagaxyo casaan ah iyo buluug buluug ah, haddii aad rabto midabyo badan, laakiin tani waxay leedahay ciid jilicsan oo jilicsan. dabaashana aad bay ammaan u tahay.
Godka Cagaaran waa fursadda ugu fiican gal tuubo lafaha adag ah. Waxaa jira dalxiisyo! Mana ilaawi karno caasimadda jasiiradda, Arrecife, garoonka diyaaradaha agtiisa, ama ee quruxda badan, kaas oo aad kaga timaad doon doon ka timid Mirador del Río. Waa jasiirad yar oo ay degan yihiin dad yar, oo aan lahayn waddooyin laami ahWaxaa ka sii daran in aad baaskiil kiraysan karto oo aad u socon karto si aad u ogaato xeebaheeda.
Ugu dambeyntii, ma jiro safar cunto iyo cabitaan la'aan iyo kiiskan Lanzarote waxay leedahay khamri wanaagsan waana mudan yihiin in la isku dayo. Wershadaha iyo beeraha lagu beero waa ku jiraan geria, dooxada oo ah gobolka jasiiradda khamriga ka baxa. Cuntadana waxaa mar walba laga dhadhamiyaa maqaayadaha iyo suuqyada, dabcan.
Safar maalmeed? Fuerteventura. Waxaa la mariyaa doon, waxaad booqan kartaa Corralejo iyo sidoo kale Beerta Qaranka ee Corralejo oo waxaad ku soo laaban kartaa Lanzarote fiidkii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Lanzarote » Lanzarote: waxa la arko